माघदेखि गाईभैंसीको नश्ल सुधार आयोजना | गृहपृष्ठ
Home समाचार माघदेखि गाईभैंसीको नश्ल सुधार आयोजना
माघदेखि गाईभैंसीको नश्ल सुधार आयोजना
पुस २७, काठमाडौं (अस)। केन्द्रीय गाईभैंसी प्रवर्द्धन कार्यालयले माघदेखि ‘दुधालु गाई भंैसीको नश्ल सुधार आयोजना’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । ३ वर्षसम्म चल्ने उक्त आयोजनामा करीब रू. ६ करोड ५० लाख लाग्ने सो कार्यालयले बताएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड)को आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको कार्यालय प्रमुख डा. लोकनाथ पौडेलले अभियानलाई बताए । उनले आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारबाट करीब रू. ६४ लाख र यूएसएडबाट रू. २ करोड ५५ हजार गरी २ करोड ६४ लाख ५५ हजार विनियोजन भएको पनि जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत दुधालु गाईभैंसीको नश्ल सुधार, मासुका लागि पाडापालन र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । कार्यालयले उन्नत जातका दुधालु गाईभैंसीको सङ्ख्या वृद्धि गरी दूधमा आत्मनिर्भर हुने आयोजनाको उद्देश्य रहेको बताएको छ ।
आयोजनाले नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इलाम, झापा, सुनसरी, सप्तरी, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी, रूपन्देही, काठमाडौं, ललितपुर र दोलखा गरी १४ जिल्ला छानिसकेको छ । ती जिल्लाका करीब ६ हजार दुधालु गाईमध्ये बढी दूध दिने २ हजार ५ सय गाई नमूना छनोट गर्ने र ती गाईको दूधको परीक्षण महीनाको एकपटकका दरले १० महीनासम्म गरिनेछ । परीक्षणबाट प्राप्त परिणामका आधारमा उत्कृष्ट गाई नश्ल सुधारका लागि छनोट गरिने बताइएको छ ।
यस्तै आयोजनाअर्न्तर्गत कार्यालयले देशका विभिन्न स्थानबाट चालू आवमा ६० ओटा उन्नत जातका साँढे खरीद गर्ने कार्यक्रम पनि छ । ती साँढे गाई प्रजनन केन्द्रहरू र गाईपालक किसान समूहहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने डा. पौडेलले बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यालयले चालू आवमा न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाबाट उन्नत जातका साँढेको करीब ५ हजार डोज (मात्रा) वीर्य आयात गरी प्रजनन गराइने कार्यक्रम रहेको छ ।
सो कार्यालयले दुधालु भैंसीको नश्ल सुधारका लागि भने सुनसरी, सर्लाही , सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु १० जिल्ला छनोट गरेको छ । ती जिल्लाका करीब ३ हजार ५ सय भैंसीमध्येबाट बढी दूध दिने १ हजार ५ सय भैंसी नमूना छनोट गर्ने र छानिएका भैंसीहरूको दूधको परीक्षण १० महीनासम्म महीनको एकपटकका दरले गरिनेछ । परीक्षणमा उत्कृष्ट देखिएका भैंसीमा भारतबाट मुर्रा जातका राँगाको वीर्य आयात गरी प्रजनन गराइने बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिवर्ष५० ओटा उन्नत जातका राँगो खरीद गरी भैंसी प्रजनन केन्द्रहरू र भैंसीपालक किसान समूहहरूलाई निःशुल्कसमेत वितरण गरिनेछ ।
यसअघि सो कार्यालयले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको करीब रू. १ करोड ४८ लाखको आर्थिक सहयोगमा १४ जिल्लामा दुधालु गाईको नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रमबाट कास्कीको भलाम गाविसमा पाइने ‘होलष्टिन’ जातको गाई उत्कृष्ट ठहरिएको छ । साथै कार्यक्रमअन्तर्गत सोही जातको गाईमा उन्नत जातका साँढेको वीर्यबाट प्रजनन कार्यक्रम लागू गरिने पौडेलले बताए । सो जातको गाईले एक बेतमा (३ सय दिनमा) औसत ८ हजार २ सय लिटर दूध दिने बताइएको छ । यस्तो गाईको मूल्य एउटाको रू. ५० हजारदेखि रू. ७० हजारसम्म पर्ने बुझिएको छ ।
दलित बस्तीमा चियाखेती
पुस २७, पर्वत (अस) । विपन्न दलित परिवारको आयआर्जन वृद्धि र जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले फलामखानी गाविसमा थालिएको चियाखेती प्रभावकारी देखिएको छ । ३ वर्षअघि थालिएको सो चियाखेतीअन्तर्गत ३० हजार चियाका बिरुवा रोपिएको पर्वत जिल्ला विकास समितिले बताएको छ । करीब ७५ प्रतिशत दलितहरूको बसोबास भएको सो बस्तीमा गरिएको चियाखेतीमा जिविस स्थानीय विकास कोषको सहयोग रहेको छ । सो चियाखेती जिल्लामा गरिएको पहिलो हो ।
रोपिएका बिरुवा इलामबाट प्रतिगोटा २ रुपैयाँ ५० पैसामा खरीद गरेर ल्याइएको थियो । फलामखानी गाविसको वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ मा पर्ने करीब ५ सय रोपनीको ‘हल्जुरे’ पाखो तथा वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ मा पर्ने २ सय रोपनीको ‘ठूलोपाखो’ सामुदायिक वन र आसपासका क्षेत्रमा लगाइएको स्थानीय विकास कोषका सचिव लीलाधर सुवेदीले बताए ।
सो चियाखेतीबाट दुइ छाक टार्न गाह्रो पर्ने दलित मजदूरहरूलाई निकै सघाउ पुगेको बताइएको छ । अहिले उनीहरूले चियाखेतीबाट आयआर्जन गर्न थालिसकेका छन् । सचिव सुवेदीले आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त कमजोर दलितहरूलाई लक्षित गरी व्यावसायिक चियाखेती गर्न कोषले कार्यक्रम ल्याएको स्पष्ट पारे । फलामखानी चिया उपभोक्ता समितिकी उपाध्यक्ष गीता सुनारले चिया उत्पादन हुन थालेपछि राम्रो आय हुन थालेको बताइन् । आर्थिक अभावका कारण प्रशोधनको समस्या रहेको उनीहरूको धारणा छ ।
चियाखेतीका लागि शुरूमा जिल्ला विकास समितिबाट रू. १ लाख २५ हजार, स्थानीय विकास कोषबाट रू. ४० हजार र प्राविधिक सहयोग तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्वतबाट रू. १७ हजार सहयोग उपलब्ध भएको बताइएको छ ।
दाङमा आलुको उत्पादन घटयो
पुस २७, दाङ (घोराही) (अस) । दाङ जिल्लामा यो वर्षआलुको उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार यस वर्ष२ हजार १ सय ५० हेक्टर जमीनमा लगाइएको आलुखेतीबाट १८ हजार १ सय ४ मेटि्रक टन मात्र आलु उत्पादन भएको छ । गतवर्ष२ हजार १ सय २० हेक्टर जमीनमा लगाइएको आलुखेतीबाट २५ हजार ८ सय ६४ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । परीक्षण नगरिएका पुराना बीउ र डढुवा रोग लागेका कारण आलुको उत्पादनमा कमी आएको कृषि कार्यालयका योजना अधिकृत तिलक केसीले बताए ।
जिल्लाको तुलसीपुर नगरपालिकाको सुनवर्षा र देउखुरी क्षेत्रमा यस वर्षआलु उत्पादन बढी मात्रामा भए पनि अन्य स्थानमा भने कम भएको बताइएको छ । दाङका विभिन्न स्थानमा यस वर्ष डिजोरे, कर्डिनल, सिन्दुरी, टिपेश जातका आलु लगाइएकोमा कार्डिनल जातको आलु मात्र राम्रो उत्पादन भएको कृषि कार्यालयले बताएको छ ।
तनहुँको सुन्तला जोगाउन उन्नत नर्सरी स्थापना
पुस २७, तनहुँ (अस)। तनहुँका किसानले आफ्नै पहलमा उन्नत जातको सुन्तलाको नर्सरी स्थापना गरेका छन् । विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएका सुन्तलाका बेर्नामा देखिएका खराबीका कारण सुन्तलाबाली नोक्सान हुन थालेपछि उनीहरूले सो नर्सरी स्थापना गरेका हुन् । आँबुखैरेनी-२ समस्तीपुरको देवीस्थान सुन्तला सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले नर्सरी स्थापनासँगै त्यसका लागि आवश्यक भवन निर्माणसमेत थालेका छन् ।
विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका कमसल बेर्ना का कारण बोट कुहिने, ग्रिनिङ ब्याक्टेरियाका कारण बोट मर्ने तथा अन्य खालका रोग देखा पर्न थालेपछि स्वस्थ बेर्ना उत्पादनका लागि ट्राइक्लाउट नर्सरी स्थापना गरिएको सहकारीका सदस्य शुकबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार कम उचाइँमा उत्पादित बेर्नाका कारण समस्या देखा परेकाले जमीन सतहबाट अग्लो स्थानमा सो नर्सरी स्थापना गरिएको हो । सो सहकारीले वर्षेनि ५ हजार बेर्ना उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तनहुँका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत डोलकृष्ण सुवेदीले ग्रिनिङ रोगले जिल्लाको सुन्तला सखाप हुन थालेको र यसलाई जोगाउने औषधीसमेत नभएकाले रोगरहित विरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापनामा आफूहरूले सघाएको जानकारी दिए । अहिले ग्रिनिङबाट जिल्लामा ३० हजारभन्दा बढी बोट मरेकाले त्यसको सट्टामा नयाँ विरुवा आवश्यक रहेकाले पनि नर्सरी स्थापना अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत डण्डपाणि खनालले सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहकारीलाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइएको बताए । नर्सरीको भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि करीब साढे चार लाख लाग्ने अनुमान छ । सहकारीले जेठदेखि बेर्ना उत्पादन हुने बताएको छ ।
गुल्मीका सुन्तला ‘सेलार स्टोर’मा
पुस २७, गुल्मी । यस वर्षगुल्मीमा बढी सुन्तला उत्पादन भएपछि किसानहरूले ‘सेलार स्टोर’मा राख्न थालेका छन् । सेलार स्टोर एक किसिमको शीत भण्डार हो । दुइ गाह्रोको बीचमा बालुवा राखी त्यसमा पाइपबाट पानी पठाएर चिसो बनाइराख्ने प्रविधिलाई सेलार स्टोर भनिन्छ । यो प्रविधि लुम्ले कृषि फार्मले विकास गरेको हो । करिब तीन महीनासम्म सुन्तला राख्न सकिने सेलार स्टोर निर्माणमा सरकारले केही अनुदान दिएकाले यहाँ यसको सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
दिगाम गाविस-२ का भीमलाल कँडेलले आफ्नै पक्की घरको एउटा कोठा (१०*१० वर्गफिट) क्षत्रेफललाई सेलार स्टोर बनाएका छन् । उनले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, गुल्मीबाट रू. १० हजार अनुदान पाएका छन् । अनुदानको रकम सानो भए पनि यसले उनलाई हौस्याएको छ । आरसीसी गरेको घरमा यस्तो स्टोर बनाउँदा ७५ हजार खर्च लाग्ने उनको अनुभव छ ।
एक दशकअघि नै यो प्रविधिको विकास भएको थियो । गुल्मी जिल्लाको नयाँ गाउँका किसानहरूले यस्ता ८/१० ओटा सेलार स्टोर निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएका थिए । तर, निर्माण कार्यमा केही त्रुटि भएर चिसो कम हुँदा पनि अधिकांश किसानले स्टोर उपयोगमा ल्याइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । भीमलाल कँडेलको बारीमा ३ सय बोट सुन्तला छन् । यसवर्षउनले २० क्विण्टल सुन्तला रिडी, रुद्रवेणी र अर्गली (पाल्पा)का व्यापारीलाई विक्री गरिसके । सालाखाला थोक मूल्य एक किलोको रू. २५ परेको सुन्तला दुइ-तीन तहमा वर्गीकरण गरेर व्यापारीहरूले रू. ४०-५० सम्ममा विक्री गरेको उनले बताए । यस वर्षगुल्मी जिल्लामा सुन्तला बढी उत्पादन भएकाले किसानले ठाउँठाउँमा गएर रू. २५ मा व्यापारीलाई थोकमूल्यमा विक्री गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उनका बोटमा सुन्तला अझै छन् । समयमा नटिपे अर्को वर्षराम्रो नफल्ने हुनाले पुसको आधासम्ममा सबै टिपेर सेलार स्टोरमा राखेका छन् । २ वर्षअघि बनाइएको उनको सेलार स्टोरमा गतवर्ष१२ क्विण्टल सुन्तला स्टोर गरेका थिए । भारतको सुन्तला फागुन लागेपछि नेपाल आउने हुनाले स्टोर गरेको उक्त सुन्तला चैतको १५ पछि मात्र निकालेर विक्री गर्ने उनको योजना छ । चैतमा यिनै व्यापारीले यो सुन्तला प्रतिकिलो रू. ५० मा किन्ने सुनिश्चित गरिदिएकाले पनि उनी ढुक्क छन् । गुल्मी जिल्लामा प्रायः सबैतिर सुन्तला हुने भए पनि भाडगाउँ र नयाँ गाउँको सुन्तलाले प्रसिद्धि पाएका छन् । कृषि विकास कार्यालय गुल्मी बलेटक्सार सेवा केन्द्रका प्राविधिक सहायक दधि ज्ञवालीले यस वर्षगुल्मीमा अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी सुन्तला उत्पादन भएको बताउँछन् । गुल्मी जिल्लामा आव २०६५/६६ मा ४ सय १० हेक्टर जमीनमा लगाइएको सुन्तलाको माउ बोटबाट ३ हजार २ सय ९० मेटि्रक टन सुन्तला उत्पादन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार आव २०६५/६६ सम्म नेपालको २१ हजार १ सय २६ हेक्टर जमीनमा सुन्तलाका बोट लगाइएको छ । यसबाट १ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । एक दशकअघि नेपालको १० हजार ५ सय हेक्टर जमीनमा सुन्तला लगाइएको र त्यसबाट ६६ हजार ६ सय ५४ मेटि्रक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । १० वर्षको अवधिमा क्षेत्रफल नौ दोब्बर र उत्पादन २ दशमलव ५ गुणा बढेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालमा सुन्तलाखेतीको विस्तार निकै छिटो भएको देखिन्छ ।